ဒီကစားသမားတွေ တစ်လတာအကောင်းဆုံးဆု မရခဲ့တာက အံ့အားသင့်စရာပါပဲ
ပရီးမီးယားလိဂ် တစ်လတာအကောင်းဆုံး ကစားသမားဆု မရခဲ့ဖူးတဲ့ ဂန္ထ၀င်များ (၁)
22 Oct 2018 . 4:07 PM
ပရီးမီးယားလိဂ် တစ်လတာအကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုဆိုတာက ပရိသတ်တွေ သိတဲ့အတိုင်း ရာသီတစ်ခုရဲ့ လအလိုက် ခြေစွမ်းပြနိုင်တဲ့သူတွေကို ပရီးမီးယားလိဂ်အဖွဲ့ချုပ်က ရွေးချယ်ချီးမြှင့်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆုကို ၁၉၉၄ သြဂုတ်လက စတင်ချီးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက် နာမည်ကျော်ကစားသမားတွေ တော်တော်များများ ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့တယ်။ အကြိမ်အများဆုံး ရရှိခဲ့တာက လီဗာပူးလ်ဂန္ထ၀င် စတီဗင်ဂျရတ် Steven Gerrard နဲ့ စပါးအသင်း လက်ရှိတိုက်စစ်မှူး ဟာရီကိန်း Harry Kane တို့ဖြစ်ပြီး (၆)ကြိမ်စီ ရရှိခဲ့တာပါ။ သူတို့နောက်မှာ အဂွဲရိုး Sergio Agüero ၊ ဗန်ပါစီ Robin van Persie ၊ ရွန်နီ Wayne Rooney တို့က (၅)ကြိမ်စီနဲ့ အများဆုံးဖြစ်နေတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်တစ်လတာ အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုကို နာမည်ကြီး ကစားသမားတွေ ရခဲ့ပေမယ့် ကစားသမားဘ၀တစ်လျှောက်လုံး မရခဲ့ဖူးတဲ့ ဂန္ထ၀င်တွေ ရှိခဲ့တာက တကယ့်ကို အံ့အားသင့်စရာပါ။ သူတို့ရဲ့ ကစားသမားဘ၀ အောင်မြင်မှုတွေအရ ဒီဆုနဲ့ ဘယ်လိုလွဲချော်ခဲ့လဲဆိုတာ စဉ်းစားမရအောင်ပါပဲ။ အဲဒီဂန္ထ၀င်တွေက ဘယ်သူတွေများလဲဆိုတော့ . . .
ဇာဘီအလွန်ဆို Xabi Alonso
ပရီးမီးယားလိဂ် တစ်လတာအကောင်းဆုံးဆုက ဇာဘီအလွန်ဆိုလို ကစားသမားမျိုးတောင် မရဖူးလောက်တဲ့အထိ ခက်ခဲလွန်းခဲ့ပါတယ်။ လီဗာပူးလ်အသင်းမှာ ၂၀၀၄ ကနေ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အထိကစားခဲ့ပြီး FA ၊ ချန်ပီယံလိဂ်၊ ဥရောပစူပါဖလားတွေ ရခဲ့ပေမယ့် အလွန်ဆိုဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်တစ်လတာ အကောင်းဆုံးဆုကိုတော့ မပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဘူး။
ပီတာရှမိုက်ကယ် Peter Schmeichel
ဒါကတော့ တကယ့်ကို အံ့အားသင့်စရာပါပဲ။ မန်ယူအသင်းနဲ့အတူ ပရီးမီးယားလိဂ် (၅)ကြိမ်အပါအ၀င် ပြည်တွင်းရော၊ ပြည်ပဆုဖလားတွေရယူခဲ့သူ ဒိန်းမတ်ဂန္ထ၀င်ကြီး ပီတာရှမိုက်ကယ်ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် တစ်လတာအကောင်းဆုံးဆုကို လွဲချော်ခဲ့တယ်။ ရှမိုက်ကယ်ဟာ မန်ယူ၊ ဗီလာ၊ မန်စီးတီးအသင်းတွေနဲ့အတူ အင်္ဂလန်မြေမှာ ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ် သမိုင်းတစ်လျှောက် အကောင်းဆုံး ဂိုးသမားစာရင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ကံအကြောင်းမလှစွာနဲ့ပဲ တစ်လတာအကောင်းဆုံးဆုကို မရခဲ့ဘူး။
ကမ်းဘဲလ် Sol Campbell
‘ကံဆိုးသူ မောင်ရှင်’ စာရင်းထဲမှာ အာဆင်နယ်ဂန္ထ၀င် နောက်ခံလူ ဆိုးလ်ကမ်းဘဲလ်လည်း တစ်ဦးအပါအ၀င်ပါပဲ။ ကမ်းဘဲလ်အဖြစ်က တကယ့်ကို ရင်နာစရာကောင်းပါတယ်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ အာဆင်နယ် ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ ဘားကမ့် Bergkamp ၊ ယွန်းဘတ် Ljungberg ၊ အွန်နရီ Henry ၊ ၀ီလ်တော့ဒ် Wiltord ၊ ၂၀၀၄ မှာ အွန်နရီ(၂ကြိမ်)၊ ဘားကမ့် Bergkamp ၊ အီဒူး Edu ၊ ရေးယက်စ် Reyes တို့ အားလုံး ဆုရခဲ့ပေမယ့် ကမ်းဘဲလ်သာ ကျန်ခဲ့တာပါ။
မက်ခီလီလီ Claude Makelele
ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ ခေတ်ဦး အောင်မြင်မှုတွေမှာ အဓိက ကျခဲ့တဲ့ မက်ခီလီလီဟာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းနဲ့အတူ ဆုဖလားအများကြီး ရယူခဲ့ပေမယ့် တစ်လတာအကောင်းဆုံးဆုကိုတော့ မရခဲ့ပါဘူး။ ကွင်းလယ်ခံစစ် ကစားသမားတွေဟာ မျက်နှာသာပေးမခံရဘူးဆိုတာ မက်ခီလီလီက အကောင်းဆုံးသက်သေပါပဲ။
ဒရော့ဘာ Didier Drogba
ချယ်လ်ဆီး ကစားသမားဘ၀မှာ ဂိုးတွေ တဒိုင်းဒိုင်းသွင်း၊ ပြိုင်ဘက်ခံစစ်အတွက် နတ်ဆိုးတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့သူ ဒရော့ဘာ တစ်လတာအကောင်းဆုံးဆုကို မရခဲ့တာက တကယ့်ကို ရယ်စရာပါပဲ။ ၂၀၀၉-၁၀ ရာသီက ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ (၂၉)ဂိုးသွင်းခဲ့သလို ချန်ပီယံဆုရရှိအောင် စွမ်းဆောင်ခဲ့ပေမယ့် အဲဒီရာသီမှာ သူ့ကို ကျော်ပြီး မာလူဒါ Florent Malouda ၊ ရှဝါဇာ Mark Schwarzer ၊ နောက်ဆုံး ဂျင်မီဘူးလက် Jimmy Bullard လို ကစားမားမျိုးတောင် တစ်လတာအကောင်းဆုံး ဆုရခဲ့ပါတယ်။
ဒီကစားသမားတွေက ပရီးမီးယားလိဂ် တစ်လတာအကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုကို မရခဲ့ဖူးတဲ့ ဂန္ထ၀င်တွေဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် အပိုင်း(၂)ကို ဆက်လက်ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်လို့ စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုကြပါဦး . .
ပရီးမီးယားလိဂျ တဈလတာအကောငျးဆုံး ကစားသမားဆု မရခဲ့ဖူးတဲ့ ဂန်ထဝငျမြား (၁)
ပရီးမီးယားလိဂျ တဈလတာအကောငျးဆုံး ကစားသမားဆုဆိုတာက ပရိသတျတှေ သိတဲ့အတိုငျး ရာသီတဈခုရဲ့ လအလိုကျ ခွစှေမျးပွနိုငျတဲ့သူတှကေို ပရီးမီးယားလိဂျအဖှဲ့ခြုပျက ရှေးခယျြခြီးမွှငျ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒီဆုကို ၁၉၉၄ သွဂုတျလက စတငျခြီးမွှငျ့ခဲ့တာဖွဈပွီး ပရီးမီးယားလိဂျသမိုငျးတဈလြှောကျ နာမညျကြျောကစားသမားတှေ တျောတျောမြားမြား ဆှတျခူးရရှိခဲ့တယျ။ အကွိမျအမြားဆုံး ရရှိခဲ့တာက လီဗာပူးလျဂန်ထဝငျ စတီဗငျဂရြတျ Steven Gerrard နဲ့ စပါးအသငျး လကျရှိတိုကျစဈမှူး ဟာရီကိနျး Harry Kane တို့ဖွဈပွီး (၆)ကွိမျစီ ရရှိခဲ့တာပါ။ သူတို့နောကျမှာ အဂှဲရိုး Sergio Agüero ၊ ဗနျပါစီ Robin van Persie ၊ ရှနျနီ Wayne Rooney တို့က (၅)ကွိမျစီနဲ့ အမြားဆုံးဖွဈနတေယျ။ ပရီးမီးယားလိဂျတဈလတာ အကောငျးဆုံး ကစားသမားဆုကို နာမညျကွီး ကစားသမားတှေ ရခဲ့ပမေယျ့ ကစားသမားဘဝတဈလြှောကျလုံး မရခဲ့ဖူးတဲ့ ဂန်ထဝငျတှေ ရှိခဲ့တာက တကယျ့ကို အံ့အားသငျ့စရာပါ။ သူတို့ရဲ့ ကစားသမားဘ၀ အောငျမွငျမှုတှအေရ ဒီဆုနဲ့ ဘယျလိုလှဲခြျောခဲ့လဲဆိုတာ စဉျးစားမရအောငျပါပဲ။ အဲဒီဂန်ထဝငျတှကေ ဘယျသူတှမြေားလဲဆိုတော့ . . .
ဇာဘီအလှနျဆို Xabi Alonso
ပရီးမီးယားလိဂျ တဈလတာအကောငျးဆုံးဆုက ဇာဘီအလှနျဆိုလို ကစားသမားမြိုးတောငျ မရဖူးလောကျတဲ့အထိ ခကျခဲလှနျးခဲ့ပါတယျ။ လီဗာပူးလျအသငျးမှာ ၂၀၀၄ ကနေ ၂၀၀၉ ခုနှဈအထိကစားခဲ့ပွီး FA ၊ ခနျြပီယံလိဂျ၊ ဥရောပစူပါဖလားတှေ ရခဲ့ပမေယျ့ အလှနျဆိုဟာ ပရီးမီးယားလိဂျတဈလတာ အကောငျးဆုံးဆုကိုတော့ မပိုငျဆိုငျခဲ့ဘူး။
ပီတာရှမိုကျကယျ Peter Schmeichel
ဒါကတော့ တကယျ့ကို အံ့အားသငျ့စရာပါပဲ။ မနျယူအသငျးနဲ့အတူ ပရီးမီးယားလိဂျ (၅)ကွိမျအပါအဝငျ ပွညျတှငျးရော၊ ပွညျပဆုဖလားတှရေယူခဲ့သူ ဒိနျးမတျဂန်ထဝငျကွီး ပီတာရှမိုကျကယျဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ တဈလတာအကောငျးဆုံးဆုကို လှဲခြျောခဲ့တယျ။ ရှမိုကျကယျဟာ မနျယူ၊ ဗီလာ၊ မနျစီးတီးအသငျးတှနေဲ့အတူ အင်ျဂလနျမွမှော ဖွတျသနျးခဲ့ပွီး ပရီးမီးယားလိဂျ သမိုငျးတဈလြှောကျ အကောငျးဆုံး ဂိုးသမားစာရငျးဝငျဖွဈခဲ့ပမေယျ့ ကံအကွောငျးမလှစှာနဲ့ပဲ တဈလတာအကောငျးဆုံးဆုကို မရခဲ့ဘူး။
ကမျးဘဲလျ Sol Campbell
‘ကံဆိုးသူ မောငျရှငျ’ စာရငျးထဲမှာ အာဆငျနယျဂန်ထဝငျ နောကျခံလူ ဆိုးလျကမျးဘဲလျလညျး တဈဦးအပါအဝငျပါပဲ။ ကမျးဘဲလျအဖွဈက တကယျ့ကို ရငျနာစရာကောငျးပါတယျ။ ၂၀၀၂ ခုနှဈမှာ အာဆငျနယျ ကစားသမားတှဖွေဈတဲ့ ဘားကမျ့ Bergkamp ၊ ယှနျးဘတျ Ljungberg ၊ အှနျနရီ Henry ၊ ဝီလျတော့ဒျ Wiltord ၊ ၂၀၀၄ မှာ အှနျနရီ(၂ကွိမျ)၊ ဘားကမျ့ Bergkamp ၊ အီဒူး Edu ၊ ရေးယကျဈ Reyes တို့ အားလုံး ဆုရခဲ့ပမေယျ့ ကမျးဘဲလျသာ ကနျြခဲ့တာပါ။
မကျခီလီလီ Claude Makelele
ခယျြလျဆီးအသငျးရဲ့ ခတျေဦး အောငျမွငျမှုတှမှော အဓိက ကခြဲ့တဲ့ မကျခီလီလီဟာ ခယျြလျဆီးအသငျးနဲ့အတူ ဆုဖလားအမြားကွီး ရယူခဲ့ပမေယျ့ တဈလတာအကောငျးဆုံးဆုကိုတော့ မရခဲ့ပါဘူး။ ကှငျးလယျခံစဈ ကစားသမားတှဟော မကျြနှာသာပေးမခံရဘူးဆိုတာ မကျခီလီလီက အကောငျးဆုံးသကျသပေါပဲ။
ဒရော့ဘာ Didier Drogba
ခယျြလျဆီး ကစားသမားဘဝမှာ ဂိုးတှေ တဒိုငျးဒိုငျးသှငျး၊ ပွိုငျဘကျခံစဈအတှကျ နတျဆိုးတဈပါးဖွဈခဲ့သူ ဒရော့ဘာ တဈလတာအကောငျးဆုံးဆုကို မရခဲ့တာက တကယျ့ကို ရယျစရာပါပဲ။ ၂၀၀၉-၁၀ ရာသီက ပရီးမီးယားလိဂျမှာ (၂၉)ဂိုးသှငျးခဲ့သလို ခနျြပီယံဆုရရှိအောငျ စှမျးဆောငျခဲ့ပမေယျ့ အဲဒီရာသီမှာ သူ့ကို ကြျောပွီး မာလူဒါ Florent Malouda ၊ ရှဝါဇာ Mark Schwarzer ၊ နောကျဆုံး ဂငျြမီဘူးလကျ Jimmy Bullard လို ကစားမားမြိုးတောငျ တဈလတာအကောငျးဆုံး ဆုရခဲ့ပါတယျ။
ဒီကစားသမားတှကေ ပရီးမီးယားလိဂျ တဈလတာအကောငျးဆုံး ကစားသမားဆုကို မရခဲ့ဖူးတဲ့ ဂန်ထဝငျတှဖွေဈပါတယျ။ နောကျထပျ အပိုငျး(၂)ကို ဆကျလကျဖျောပွသှားမှာဖွဈလို့ စောငျ့မြှျောဖတျရှုကွပါဦး . .